रोचक : एक पटक हाच्छ्युँ गर्दा एक लाख किटाणु बाहिर निस्कन्छन्, यस्तो छ हाच्छ्युँ आउनुको कारण - Himali Patrika
रोचक : एक पटक हाच्छ्युँ गर्दा एक लाख किटाणु बाहिर निस्कन्छन्, यस्तो छ हाच्छ्युँ आउनुको कारण
हिमाली पत्रिका ५ असार २०७७, 4:23 pm
काठमाडौं । हाच्छ्युँ नआउने प्राय मानिस नै हुँदैनन् । केही व्यक्तिलाई धेरै र केहीलाई कम मात्र हाच्छ्युँ आउँछ । रुघाखोकीको समयमा भने हाच्छ्युँ सबैलाई आउँछ । आज हामीले हाच्छ्युँको कारण र हाच्छ्युँ आउँदा के हुन्छ भन्ने विषयमा रोचक जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं ।
एक पटकमा एक लाख किटाणु बाहिर
हाच्छ्युँको गति सय माइल प्रतिघन्टा हुने अनुमान गरिएको छ । एक पटकको हाच्छ्युँमा झण्डै एक लाख किटाणु बाहिर जाने गरेको विभिन्न अध्ययनको अनुमान छ ।
हाच्छ्युँ निद्रामा आउँदैन किनकि सुत्दाखेरी हाच्छ्युँ गराउने नसाहरू आराम गरिरहेका हुन्छन् । हाच्छ्युँ आउनुलाई धार्मिक मान्यतामा नराम्रो मानिन्छ । तर वैज्ञानिक रुपमा भने यो राम्रो नराम्रो दुवै हो ।
हाम्रो परम्परागत सोचाइमा साइतको बेलामा हाच्छ्युँ गर्दा अशुभ हुन्छ भन्ने मान्यता छ । यात्राको सुरुवातमै हाच्छ्युँ आएमा केहीबेर रोकेर यात्रा गर्ने चलनसमेत छ । तर यसो गर्नु गलत हो ।
हाच्छ्युँ रोक्दा शरीरलाई नोक्सानी हुन्छ । एक पटक हाच्छ्युँ गर्दा झण्डै १ लाख किटाणु हाम्रो शरीरबाट बाहिरिन्छन् भन्ने वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि भैसकेको कुरा हो ।
हाच्छ्युँको कारण के हो ?
शरीरको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमताकै एक अंग हाच्छ्युँ हो । हामीले हाच्छ्युँ गर्नु भनेको रोगसँग लड्ने क्षमताको प्रदर्शन पनि हो ।
फोक्सोबाट हावा नाक र मुखको बाटो हुँदै तीव्र गतिमा बाहिर आउँछ । नाकमा बाहिरी कण घुस्दा नाकको झिल्ली चिलाउँछ वा फुल्छ । यसो हुँदा नाकले यो सन्देश मस्तिष्कसम्म लग्छ र मस्तिष्कले नै कणलाई शरीरबाहिर मांसपेशीहरूलाई हटाउन आदेश दिन्छ । यस्तो अवस्थामा हाच्छ्युँ आउँछ ।
हाच्छ्युँको माध्यमले यस्ता हानिकारक कणलाई शरीरबाट बाहिर निकाल्छ । त्यति मात्र होइन, हाच्छ्युँ गर्दा पेट, छाती, डायफ्राम, घाँटी र आँखासमेत सक्रिय हुन्छन् ।
हाच्छ्युँ रोक्दा के हुन्छ ?
शुभ वा अशुभको पछि लागेर हाच्छ्युँ रोक्न खोज्दा हाम्रो शरीरलाई नकारात्मक असर पुग्छ । हामीले हाच्छ्युँ रोक्दा बाहिर निस्कनुपर्ने हावा अन्य अंगतिर मोडिन्छ । त्यसरी हावा अन्य अंगतिर गएपछि किटाणुसमेत हाम्रो शरीरमै रहन्छन् ।
हाच्छ्युँ नगर्दा धेरै असर कानको जालीलाई पुग्छ । आँखा र घाँटीको पछाडिको भागलाई समेत नकारात्मक असर पुग्छ । लगातार यसो गर्दा हृदयघात र दिमागमा क्षतिसम्म हुनसक्ने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
हामीले जुनसुकै अवस्थामा हाच्छ्युँ रोक्नु हुँदैन । यसलाई शरीरको प्राकृतिक प्रक्रियाकै रूपमा लिन पर्छ । भीडभाडमा हुनुहुन्छ भने बरू हाच्छ्युँ गर्ने बेलामा नाकमुखमा रुमाल राख्नुस् । त्यसो गर्दा अन्य व्यक्तिलाई संक्रमण हुन पाउँदैन ।
सूर्यको किरण नाको भित्रि तहमा परेको अवस्थामा हाच्छ्युँ गराउने सिस्टम सक्रिय भएर तपाईँलाई हाच्छ्युँ आउँछ । बेलाबेलामा माथि सूर्यको प्रकाश तर्फ फर्किएर हाच्छ्युँ गर्नु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ ।